अमेरिकी सेनाको विमान कसले खसाल्यो ? यस्तो रहस्य बाहिरीए पछि विश्वभर तरङ्ग — Imandarmedia.com
अमेरिकी सेनाको विमान कसले खसाल्यो ? यस्तो रहस्य बाहिरीए पछि विश्वभर तरङ्ग
एजेन्सी। अमेरिकी सेना सवार विमान उत्तरी नर्वेमा दुर्घटना नभइ खसालेको आसंका गरिएको छ। यो कुरा नर्वेली उद्धार केन्द्रले जनाएको छ। नर्वेमा दुर्घटना भएको उक्त अमेरिकी सैन्य विमानको बारेमा संयुक्त राज्य अमेरिकालाई थाहा छ तर घटना गुपचुप राख्न खोजिएको छ।
हाल घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै अमेरिकी मरीन कोर्प्सका प्रवक्ताले तेस्तो संकेत गरेका छन्। यसअघि नर्वेली उद्धार केन्द्रले खोजी कार्य जारी रहेको बताएको थियो।
बिमान सम्पर्क बिहिन हुनु र रुसले हाईपरसोनीक मिसाइल प्रहर हुनु संयोग मात्र नभएर बिमान रुसको निसानामा खरानी भएको अन्तरराष्टिय संचारमाध्यम हरुले जनाएका छन।
अमेरिकी सेनाले नर्वेजियन अधिकारीहरूलाई खोज र उद्धार कार्यमा सहयोग गरिरहेको प्रवक्ताले बताए। तर बिमान नाम निसाना केहि भेटिएको छैन। श्रोतले भन्यो कति जना सैनिक सवार थिए त्यो पनि गुप् चुप रखिएको छ।
अमेरिकी मरीन कोर्प्सका प्रतिनिधिले ओस्प्रे विमानले एक्सरसाइज कोल्ड रेस्पोन्स २०२२ नामक नाटो सैन्य अभ्यासमा भाग लिइरहेको पनि बताए। विमानमा सवार सबैको मृतु भएको नर्वेलि संचार मध्यमले जनाएक छन्।
तेस्तै, युक्रेनमा रुसले गरेको आक्रमणबीच अमेरिकाले रुसविरुद्ध विभिन्न देशबाट समर्थन जुटाउने प्रयास गरिरहेको छ। तर चीनले भने अमेरिकासँग ताइवानको मुद्दाको विषयमा कुरा गर्न थालेको छ।
शुक्रबार चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनबीच वार्ता भएको थियो। यस क्रममा जिनपिङले बाइडेनलाई ताइवान मुद्दामा कुनै पनि त्रुटिले चीन-अमेरिका सम्बन्धमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
समाचार एजेन्सी रोयटर्सले चिनियाँ मिडियालाई उद्धृत गर्दै यो जानकारी दिएको हो। ताइवान आफ्नो एउटा प्रान्त हो, जुन एक दिन फेरि चीनको हिस्सा बन्नेछ भन्ने चीनको विश्वास छ।
चीनले ताइवानलाई बल प्रयोग गरेर फिर्ता ल्याउन सकिने र यो अमेरिकासँगको सम्बन्धको सबैभन्दा संवेदनशील र महत्वपूर्ण मुद्दा भएको बताएको छ।
बाइडेनसँगको कुराकानीमा जिनपिङले भने, अमेरिकाका केही व्यक्तिहरूले ताइवानको स्वतन्त्रता समर्थक शक्तिहरूलाई गलत संकेतहरू पठाइरहेका छन्, यो धेरै खतरनाक छ। यसले धेरै नराम्रो प्रभाव पार्नेछ।
यसै क्रममा ह्वाइट हाउसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सी जिनपिङसँगको वार्ताका क्रममा बाइडेनले ताइवानका सम्बन्धमा अमेरिकाको नीतिमा कुनै परिवर्तन नभएको उल्लेख छ।
तेस्तै, रुसप्रति भारतको अडानबाट अमेरिका निराश भएको छ । बारम्बार दबाबका बाबजुद पनि भारतले रुसप्रति आफ्नो तटस्थ अडान परिवर्तन नगरेपछि अमेरिका अहिले धम्कीमा उत्रिएको छ । अमेरिकाले भारतले रुससँग गठबन्धन गरे ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने बताएको छ।
ब्लुमबर्गको रिपोर्टका अनुसार राष्ट्रपति जो बाइडेनका शीर्ष आर्थिक सल्लाहकार ९ह्वाइट हाउस नेशनल इकोनोमिक काउन्सिलका निर्देशक० ब्रायन डीजले अमेरिकी प्रशासनले भारतलाई रुससँग गठबन्धन नगर्न चेतावनी दिएको बताएका छन्। उनले युक्रेन र रुस युद्धमा भारतको केही प्रतिक्रियाबाट अमेरिका निराश भएको बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार वेबसाइट क्रिस्चियन साइन्स मनिटरले बुधबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले पत्रकारहरुलाई भने, ‘युद्धको सन्दर्भमा यस्ता धेरै मौकाहरूमा चीन र भारत दुवैका निर्णयबाट हामी निराश भएका छौं ।’ उनले अमेरिकाले भारतलाई रुससँगको रणनीतिक साझेदारीलाई अझ बढाएमा भारतले यसको दीर्घकालीन परिणाम भोग्नुपर्ने बताएको बताए ।
युक्रेनमा रुसको आक्रमणलाई लिएर अमेरिका, युरोपेली देश, अस्ट्रेलिया र जापानले रुसमाथि कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएका छन् । भारतले भने रुसी आक्रमणको आलोचना समेत गरेको छैन । भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघमा रुसी आक्रमणको निन्दा गर्ने प्रस्तावमा मतदानबाट पनि आफूलाई टाढा राखेको छ ।
भारतले लगातार हिंसाको अन्त्य हुनैपर्ने र दुवै पक्षले कूटनीतिक तवरले मतभेद समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ। भारतले युक्रेनमा मानवीय सहायता पनि पठाएको छ । योसँगै रुसले भारतलाई सहुलियत दरमा इन्धन तेल उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ, जुन भारत लिन तयार छ । भारतले पनि पहिले जस्तै रुसबाट तेल आयात गर्ने क्रम जारी राखेको छ ।
पछिल्ला केही दशकहरूमा भारत र अमेरिका निकै नजिक आएका छन् र दुई देशबीचको रणनीतिक र सामरिक सम्बन्ध पनि निकै सुदृढ भएको छ । चीनको आक्रामकताविरुद्ध अमेरिकाले भारतको साथ रहेको देखाएको छ र पटकपटक भारतको पक्षमा बयान दिएको छ ।
चीनको प्रभावलाई रोक्न भारतलाई पनि अमेरिकाको सहयोग चाहिन्छ, तर रुस–युक्रेन युद्धमा भारतको निष्पक्ष र स्वतन्त्र अडानका कारण अमेरिका भारतसँग निकै रिसाएको छ । अमेरिकाले भारतसँग हरेक तहमा वार्ता गरेर आफ्नो अडान परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेको छ ।
धेरै अमेरिकी अधिकारीहरू पनि भारत आएका छन् तर यी सबैले अहिलेसम्म कुनै काम गरेको छैन।गत हप्ता अमेरिकाका उपराष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार दलीप सिंहले पनि भारत भ्रमण गरेका थिए । भारत भ्रमणका क्रममा दलीपले भारतलाई रुससँग सम्बन्ध नराख्न आग्रह समेत गरेका थिए ।
उनको भ्रमणका सम्बन्धमा ह्वाइट हाउसकी प्रेस सेक्रेटरी जेन साकीले भर्खरै भनेकी थिइन् “आफ्नो भ्रमणको क्रममा दलीपले आफ्ना भारतीय समकक्षहरूलाई स्पष्ट गरे कि हामी रुसी ऊर्जा र अन्य सामानको आयात बढाउन भारतको हितमा छैन भन्ने मान्छौं । भारतको विदेश मन्त्रालयले अमेरिकाबाट आएका यी टिप्पणीहरूमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।
एक अमेरिकी अधिकारीले बुधवार रुस विरुद्ध नयाँ प्रतिबन्धको बारेमा आफ्नो नाम नछाप्ने सर्तमा पत्रकारहरूसँग कुरा गरे। उनले अमेरिका र बाँकी जी–७ देशले भारतसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने र यसका लागि सक्दो प्रयास जारी राख्ने बताए । अधिकारीले भने कि भारत र अमेरिका खाद्य सुरक्षा र विश्वव्यापी ऊर्जामा ठूलो सहयोगी हुन्।
अमेरिकाले भारतलाई रुससँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ नबनाउन र आफ्नो तेल र रक्षा हतियारमाथिको निर्भरता अन्त्य गर्न भनिरहेको छ । त्यसको बदलामा उसले भारतलाई हतियार र तेल दिने बताएको छ।
तर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अमेरिकाको यो प्रस्तावको विरोध गरेका छन् । उनले पाकिस्तान र चीनसँग लड्न भारतलाई रुसी हतियार चाहिने र हतियार दिन तयार अन्य देशहरुका हतियार निकै महँगो परेको बताएका छन्।